ဝဏနဲ့လူစ Winner and Loser | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဝဏနဲ့လူစ Winner and Loser
ဝဏနဲ့လူစ Winner and Loser
ဒီချုပ်အစိုးရ ရက်၃ဝသက်တမ်း ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီကာလရောက်ဖို့ လူပေါင်းများစွာ စတေးခဲ့ရ၊ အဲဒီထဲ အညတရ ပါသလို ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များ မရှားဘူး။ တင်က ျန်ရစ်သူက သုံးပုံတပုံေတာင် ပြည့်ရဲ့လား.. လူပေါင်းမှားသူ၊ လမ်းရွေးမှားသူ ဒီမိုကရက်များဆို မိအေး၂ခါနာပါပဲ၊ အခ ျို့လည်း ရထားဘူတာ ဆိုက်ခါနီးမှ ခုန်ခ ျခဲ့.. ။ အစိုးရအဖွဲ့ ပဏာမ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရက်၁၀ဝ ပြည့်မှ သိနိုင်မည်မို့ စစ်အဆိုးဓမြခေတ်အလွန် ဒီမိုအစိုးရခေတ် အစပိုင်း ရောက်သလောက် ဘယ်သူနိုင် ဘယ်သူရှုံး ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်…
(၁) ဒီခ ျ ုပ်ပါတီ
နှစ်ပေါင်းအစိတ် ဖိနှိပ်ထုထောင်းခံ ဘဝကနေ အာဏာရပါတီ ဖြစ်လာပြီမို့ အနိုင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုက်သင့်သော အောင်နိုင်မှုပါ။ ပြည်သူအများစု လိုအင်ဆန်ဒနဲ့လည်း ကိုက်ညီ၊ နိုင်ငံအတွက်လည်း လိုအပ်နေသမို့ ထီးလိုမင်းလို နတ်လူသာဓု ခေါ်ကြပါသည်။
(၁.၁) ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးခ ျုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
မူလ ဒီချုပ်ပါတီဝင်မဟုတ်၊ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်တွင်မှ ဒီချုပ်နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သူ ၈၈မျိုးဆက် ကေ ျာင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး။ သူ၏ ပြတ်သားမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် စွမ်းရည် သင်္ကြန်ကိစ်စတွင် ပြခဲ့ပြီးပြီ။ ထောင်လည်း ဆယ်နှစ်ကေ ျာ်က ျခဲ့သူ၊ ၈၈မ ျိုးဆက်အဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်အခြေစိုက် အခြားနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ ထောက်ခံမှု ရထားသူ..။ လူမှန်နေရာမှန် လမ်းရွေးမှန် လူပေါင်းမှန်မို့… မအောင်မြင်စရာ မရှိပါ…။
(၁.၂) ဒီခ ျုပ်လို အခြား အနိုင်ကြီးသူများကတော့ အနာမခံရ အသာစံရသူ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တက်ခနိုခရက်နဲ့ လွှတ်တော ်အမတ်များပါ။ မုဒိတာပွားလ ျက် အားကိုးပါရစေ..။ သူတို့နောက်ကတော့ ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်း နှိပ်စက်ဖျက်ဆီးခံရပြီး ကြွင်းက ျန်လ ျက် အစိုးရဖွဲ့ အသီးသီးက ဒီချုပ်နဲ့ ဒီမိုကရက်များပါ… အလေးပြုပါတယ်။ လာဘ်ရှိ ခြိိုးခြံေချွတာေရး မူဝါဒအတိုင်း ဆက်သွားနိုင်လ ျင် ပါတီနှင့် အစိုးရ၊ လွှတ်ေတာ် အဖွဲ့ဝင်များအကြား ေနရာလုမှု ပြသနာ အေတာ်ေအးချမ်းေနမည်။
ရာစုနှစ်တဝက်ကြာ ပြစ်တင်ရှုံ့ခ ျ ခံလာရတဲ့ အစိုးရပိုင် သတင်းစာ မြန်မာ့အလင်းနဲ့ ကြေးမုံ၊ ပြန်ကြားရေးဝဘ်ဆိုက် တို့ကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အားပေးဖတ်ရှုသူ သိသိသာသာ များလာသမို့ အောင်မြင်မှုကို ရက်၁၀ဝမပြည့်ခင် တင်ကြို ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးဦးဖေမြင့် နဲ့ သတင်းတိုက်တို့ ဂုဏ်ယူစရာပါ။
အခြေခံဥပဒေ ဂယ်ပေါက်ကြောင့်သာ အတိုင်ပင်ခံရာထူး ရတာမို့ စစ်တပ်အတားအဆီး ကေ ျာ်လွှားပြီး နိုင်ငံသမတရာထူး မရသရွေ့ ထိုက်သင့်တဲ့ အောင်နိုင်မှုလို့ ပြောရန်ခက်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သမတထက် ပါဝါရှိသူ ဖြစ်လာပြီမို့ နိုင်သူစာရင်းထဲ ထည့်ရပါမည်၊ တဖက်ကလှည့် တွေးပြန်တော့ ထိပ်ဆုံးနေရာ မရောက်သေးသမို့ နောင်လာမည့်ငါးနှစ် စုသမတ သမတစု ကြွေးကြော ်သံနဲ့ ဒီခ ျုပ်ပါတီ ထပ်မံအနိုင်ရမည့် နမိတ်ပါပဲလို့။
(၄) ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်
ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်.. ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွတ်မဟာမိတ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရက်ပါတီကို အလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့သော ၁၉၉ဝ ယခင်ရွေးကောက်ပွဲရလာဘ် ဆက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီဖြစ်ပါတယ်။ မေ ျှာ်မှန်းသလောက် မရခဲ့ပေမဲ့ ရှေ့ဆက် ဒီထက်တက်ဖို့သာ ရှိသည်။
(၅) စစ်တပ်နှင့် ငြိမ်းခ ျမ်းရေးစာခ ျုပ် မခ ျုပ်ရသေးသော လာဘ်နက်ကိုင်အဖွဲ့မ ျား
သူတို့လည်း အသက်စွန့် လောင်းကြေးထပ် မှန်သွားတယ် ဆိုနိုင်တယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ဂုဏ်သိပ်ခါပိုတက်၊ အမြတ်တင်က ျန်ခဲ့တာ ငြင်းမရ။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်အခြင်းခြင်း လက်မထောင်နိုင်သည်၊ နိုင်ငံရေးလောကထဲ ခေါင်းမော့ဝင်လို့ရသည်။
အာဏာလာဘ်မဲ့ ဖြစ်ပြီ၊ စစ်တပ်ကေ ျာထောက် နောက်ခံမရှိလ ျင် နောင်ရွေးကောက်ပွဲ အမည်ပင် က ျန်မည်မဟုတ်။ ဥပမာအနေနှင့် မဘသ မျိုးညစ်များကို မြင်နိုင်သည်။ ဖွတ်ပါတီအစိုးရလာဘ်ထက် စွာသလောက် ဒီချုပ်အစိုးရလာဘ်ထက် ကြက်ပေ ျာက်ငှက်ပျောက် ပေ ျာက်ကုန်သည်။ လာမည့်ပါတီညီလာခံတွင် ဦးရွှေမန်းအုပ်စု အသာရပါက ဦးသိန်းစိန်တို့ ဒေါက်တာနေဇင်လတ်၏ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီသို့ ငွေထုပ်ပိုက် ကူးပြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ အမတ်လောင်း ဝင်ပြိုင်ဖူးသော ဂဇက်ရွာသားမောင်ပေ ကောင်းစားတော့မြည်လော…
(၂) အမ ျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု
ဦးခင်မောင်ဆွေနဲ့ အပေါင်းအပါများပါ။ ဒီလောက်စွန့်ပြီးမှ နိုင်ငံရေးအတွက်လွဲတာနဲ့ ဘေးရောက်သွားရပြီ။ နို့မိုဆို ဒီအချိန် အစိုးရအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်တွင်း မပါတောင် ပါတီထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များအဖြစ် မူဝါဒခ ျမှတ်ပဲ့ကိုင်သူများ ဖြစ်နေပြီ။
အလွန်တော်သူ စေတနာမှန်သူ စွမ်းရည်ရှိသူ.. ခုတော့ သူလည်း ဘေးရောက်နေပြီ။ ဒေါ်စု မူဝါဒများကို အားမလိုအားမရဖြစ်ရာမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်၊ အူးသိန်းစိန်အဆိုးဓမြနဲ့လည်း နီးစပ်လာ.. အဲဒီကနေ နိုင်ငံရေးကင်းကွာ။ ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ ပြုတဲ့အမှားများကတော့ ဒီမိုကရေစီပညာရေး ကေ ျာင်းသားသပိတ်ကို ပ ျက်ရယ်ပြု ၊ ဒီခ ျုပ်ပါတီ အပြတ်အသတ် အနိုင်မရနိုင်လို့ ဟောကိန်းထုတ်လွဲ။။ လူခြစ်တဲ့ အနုပညာရှင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူမို့ လဲက ျ ပြန်ထ ထိုခဏ နိုင်ငံရေးလောကထဲ ပြန်ဝင်ရန် မခက်ပါ။
အရှုံးကြီးပါသည်။ အစဉ်အလာ ရှိပေမည့် ဘယ်တုံးကမှ ပြည်သူကြားထဲ ရေပန်းမစားခဲ့..ခုတော့ ပြည်ဖုံးကားချသွားပြီ။
၁၉၈၈မှာ အာဏာစွန့်တဲ့ မဆလပါတီကနေ ဘဏ္ဍာရေး အမွေဆက်ခံမှုသာ မရှိရင် သမိုင်းမှာ က ျန်ခဲ့တာကြာပြီ။ အခုတော့ ဇတ်သိမ်းမလှ… အကြံပြုခြင်တာ က ျန်နေတဲ့ ပါတီငွေကြေးဓနဥစာများကို ပါတီလူကြီးများ ခွဲဝေယူလိုက်ပါလို့…။
ဘာလဲ ဘယ်လဲ.. လာဘ်ရှိပုံစံနဲ့တော့ ချောက်ထဲ။ ပါတီဥကဌ ဦးအေးမောင်နဲ့ အခြားအမာခံ သောက်တလွဲများကြောင့် ရထားသော အောင်မြင်မှု၊ ဩဇာက ျဆင်းသွားသည်။ နောင်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရှုံးကြီးရှုံးသော ဖွတ်မဟာမိတ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရက်ပါတီကဲ့သို့ ဖြစ်မည်။
အနိုင်အရှုံး မသိသေး.. လှုပ်ရှားမှ မုန့်စားရမည့်သူများ..
(၁) စစ်တပ်၊ ရဲ
(၃) ဗကသများအဖွဲ့ခ ျုပ်
မြန်တြံ့နိုင်ငံေရး ေရှ့ဖြစ်အတတ်ေဟာ ဆရာကဝိပညာရှိ ဦးကြောင်ကြီး … ငါကွ
(ဘဲဥ) အမေရိကား..။ နိုင်သည်။ သူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်သွားသည်။ ဆန်ရှင်မဖြုတ်သေးသမို့.. မယုံသင်္ကာတော့ရှိသေးပုံပေါ်သည်။
(ကြက်ဥ) ချိုင်းနား..။ နိုင်ပြန်သေးသည်။ တပ်မတော်နှင့် သူပုန်များကို လက်နက်ရောင်းနေနိုင်သေးသည်။ ကျောက်စိမ်း/သစ်.. သယံဇာတတို့နှင့်… သတို့သမီးတို့ကိုလည်း ဈေးပေါပေါနှင့် ကောင်းကောင်းရသေးသည်။
(ငုံးဥ) ထိုင်း..။ နိုင်ပြန်တာပါပဲ..။ သူ့ဆီရောက်နေသော ရဖြူဂျီနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားဈေးပေါပေါနှင့်ခိုင်းစားရနေသေးသည်။ ထိုင်းပစ္စည်းတွေလည်း မြန်မာပြည်မယ် ရောင်းကောင်းဆဲ..။
(လိပ်အု)..မလေးရှား..။ မနိုင်တနိုင်..။ လူတချို ့ခိုင်းမရတော့ပေမဲ့ ရွာကလူဒွေ တစ်ချို ့တော့ ကျန်သေး၊ သွားလာနေသေးလို့ဈေးမပေါ တပေါနဲ့ခိုင်းစားလို ့ရနေသေးတယ် တဂျီး
ဝဏတို့၊ လူစ တို့ ဖြစ်ဖို့ အမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဒိုင် တွေ ထဲ က အများဆုံးလို့ ထင်ရတဲ့ ဟိုဘက် ဒီဘက် မဟုတ် တဲ့ ကြားလူ ဆိုတဲ့ အင်အား တွေ အကြောင်း …. ကို
မြန်မာနိုင်ငံရေးထဲ ဆက်ပြီး ဝင်လိုသူများ ….
အသေအချာ အရင် လေ့လာကြ ပါလေ။
ကြားလူ တို့ ဟာ နလပိန်းတုန်း များ မဟုတ်တာ ကိုသတိပြုပြီး ခြေလှမ်းများ မှန်ကြပါစေ။
နိုင်ငံ အပေါ်၊ ပြည်သူအပေါ် တကယ် စေတနာရှိကြ မှ လဲ ဝင်ကြပါလေ။
အဲ ဝန်းရံ တဲ့ သူတွေ အပိန်းမဖြစ်ဖို့လည်း လိုသေး ..
အစိုးရသစ်တွေရဲ့ ပဏာမစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရက်၁၀ဝ ပြည့်မှာ အကဲခပ်နိုင်ကြတယ်ဆိုပေမယ့်-
လက်ရှိမြန်မာပြည်အနေအထား အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီရဲ့ အနေအထားအရ ရက် ၁၀ဝ နဲ့ ကြည့်ပြောဖို့တော့ စောလွန်းတယ်။
အစိုးရစဖြစ်တဲ့ ဧပြီတစ်လလုံးနီးပါးဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဘာမှမလုပ်တဲ့ အချိန်တွေဖြစ်တယ်။
ဒီအစိုးရကလဲ စံနစ်သစ်ကို ဖေါ်ဆောင်ဖို့ စိတ်လောနေတာဖြစ်တယ်။
(ကျုပ်အမြင်တော့ လောလွန်းတယ်..။ နောက်က ကျားလိုက်နေသလိုပဲ..)
ဆိုတော့ .. ကျုပ်ကတော့ အဲ့ဒေါင်းကြီး တကယ်စွမ်းမစွမ်း ခြောက်လလောက်တော့ စောင့်ကြည့်ဦးမှာဖြစ်တယ်..။
ဒီကြားထဲ ချောင်းဆိုးရင်ဆိုးပြန်ပြီ နှာချေရင်ချေပြန်ပြီဆိုပြီး အထအနကောက် အပြစ်မရှာသေးဘူး..။
တစ်ခုရှိတာကလဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့ ပါတီတစ်ခုဆိုတာ ခြောက်ပြစ်ကင်းနေဖို့ မမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူး..။
ထေရာဝါဒ.. ဘာသာရေးက စမကိုင်ရင်.. ဘယ်နှနှစ်ကြာကြာ.. ရကိုမရနိုင်ဘူးလို့… ပြောချင်မိတယ်..။
ဒေါ်စုကို အကွက်ရွှေ့တာတော်တယ်… ဒေါ်စုအကွက် ဒေါ်စုအကွက် နဲ့ ပြောနေကြတာ.. တကယ်တော့ ဒေါ်စုက စေတနာမှန်မှန်နဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ပဲ ကြည့်ပြီးလုပ်တာဖြစ်လို့ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကုန်လုံးက မှန်နေတာတဲ့…